Maleeshiyaadkii ku dagaalamay Xananbuure oo Maanta la kala qaadayo - Radio Risaala: Somali News Online
Home Wararka Maleeshiyaadkii ku dagaalamay Xananbuure oo Maanta la kala qaadayo
Maleeshiyaadkii ku dagaalamay Xananbuure oo Maanta la kala qaadayo
Waxaa weli dadaalo xoogan ay ka socdaan degaanka Xananbuure ee Gobolka Galgaduue, halkaas oo maalmihii la soo dhaafay ay ku dagaalamayeen laba maleeshiyo Beeleed.
Dhawaan dowladda Soomaaliya ayaa Ciidamo u dirtay degaanka Xananbuure si dagaalka loo joojiyo, balse mid kamid ah dhinacyada dagaalamaya ayaa u diiday in ay Ciidamada galaan degaanka, iyaga oo rasaas huwiyay.
Odayaasha Dhaqanka degaanka Xananbuure iyo kuwa Magaalada Cadaado oo kaashanaya mas’uuliyiin ka tirsan Maamulka Galmudug ayaa la filayaa inay Maanta kala qaadaan, iyada oo amniga degaanka lagu wareejin doono Ciidamo ka tirsan dowladda.
Xaalada degaanka Xananbuure ayaa Maanta degan, waxaana dadka degaanka ay sheegayaan inay socdaan dadaalo xal looga gaarayo dagaalka.
Previous articleQarax ay mas’uuliyiin ku dhaawacmeen oo ka dhacay Gobolka Baay
Next articleXiisadda u dhexeysa Faransiiska, Australia, Mareykanka & Britain oo xoogeysatay